Funda indlela umoya izinwele curling
Sekuyisikhathi eside abantu waphawula ukuthi usebenzisa ithuluzi sishisiswe lokushisa eliphezulu, kungenzeka ukushintsha isakhiwo izinwele, okungukuthi ukudala ringlets noma curls. Ngisho nabaseGibhithe lasendulo ukusetshenziselwa lokhu ekhethekile metal izinduku eyayibonakala kushiswa a Yengcweti Yethusi. Ngemva nje kancane kwalokho, izakhamuzi eGrisi lasendulo izinduku ezinjalo ziye zathuthukisa yazuza uhlobo curling izinwele. Ayeyisizwe esikhulu round induku nge isibambo elenziwe ngetshe lendlovu noma ngokhuni ukuyigcina eshubile. Uma ubheka emuva emifanekisweni yamaGreki asendulo futhi imidwebo esibonisa unkulunkulukazi, singabona ukuthi amakhanda abo kuhlobisa zezinwele of curls zime ngendlela efanele. Lokhu kusikisela ukuthi ngisho nangaleso sikhathi babe amakhosi uyakwazi izinwele abesifazane amahle kangaka futhi exquisitely baba sika.
izindlela zesimanje izinwele curler
Namuhla, abesifazane abaningi dream of a izinwele zikanokusho abacaphuni. lapha kuphela arsenal salokhu kwaba okuningi. izinguquko Big zabhekana futhi intonga curling izinwele. Namuhla, akuve kulula futhi emnene izinwele amathuluzi - curling. Njengoba ngisho namuhla, akubona bonke abesifazane ukwazi indlela umoya curling izinwele nendlela yokubavikela ngesikhathi perming, nganquma ukumbhalela lesi sihloko. Kuyo, mina kuzoveza kuwe abanye izimfihlo kalula nangempumelelo ukuhlala uthokomale ufunde izinwele ngosizo leli thuluzi.
Okufanele ukwenze ngaphambi negagasi
Ufuna ukwazi indlela umoya izinwele phezu ngensimbi curling? Kodwa kudingeka ukulungiselela ngaphambi kokuqala inqubo. Ukuze wenze lokhu, ugeze izinwele zakho nge imoto bese boma izinwele zakho bese sizisebenzise thermofilter spray.
Indlela yokusebenzisa i-curling
Futhi manje ake sixoxe ngqo mayelana nendlela umoya kahle izinwele ngensimbi curling. Okokuqala udinga kuwahlukanise ku sivala bushelelezi futhi izibopho yokuvala. Khona ngokucophelela Strand ngalinye nilimaza ku curling, uthome amathiphu kanye ukuthuthela izimpande. Exposure isikhathi ukuhlala uthokomale ufunde ku imicu kufanele kube imizuzwana 20. Ngemva esebenzisa ngeke asuswe imicu, it waphinda uthwebule isiqeshana, ukuze cool, akuyona waqonda. Uma ukufakwa kwenziwa, ikhanda wafutha hairspray enqabeni, asuse izibopho futhi hhayi ecwaninga izinwele, babeka izandla zabo. Manje ngoba sewuyazi ukuthi indlela ukusonta izinwele ngensimbi curling. Ungesabi lokho Kuyophumela ethubeni imicu engalingani. Ikhono iza nakho.
Ukuvikelwa ukuchayeka okushisa aphakeme
Bengivele wakhuluma ukuthi ngaphambi kokuba uqale curling nezizenze izinwele, sizisebenzise thermofilter spray. Kuyokusiza ukuvikela izinwele zakho emiphumeleni okushisa aphezulu ukuthi ukuchayeka ngokuphindaphindiwe aphange kubo. Ngakho nonwele isitayela curling kwenziwe njalo, kube nomthelela omubi kubo, akufanele singayinaki ukunakekelwa okwengeziwe. balms abahlukahlukene futhi hydrating imaski okumele asetshenziswe okungenani izikhathi 2 ngesonto, uzokwenza izinwele zakho nokunwebeka, acwebezelayo futhi uzilungise kahle.
Kulesi sihloko, thina ngokuningiliziwe indlela umoya izinwele ngensimbi curling. Ngithemba amathiphu ami kuzokusiza ukudala i curls ekahle zikanokusho futhi ukubukeka shiny futhi unempilo izinwele yakho izohlala ingashintshiwe lonke ukusetshenziswa esebenzisa.
Siphungule izinwele chamomile.
I imfashini kakhulu iholidi zezinwele izinwele naphakathi
I namafutha lihlukile conditioner emoyeni izinwele? Yini lokukhetha?
Izinwele ezinde mncane: Yini alungise izinwele suit?
Shampoo for ekhanda ebucayi: "Natura Siberika", "Vella", "uLonda", "Kloran" nabanye
Amatafula eyenziwe yokufakelwa itshe acrylic
Emithonjeni ePeterhof kanye izimfihlo zabo
Kanjani ukuyeka besimayili nokukhophozela nganoma yisiphi isizathu? Amathiphu nendlela yokubhekana ukuphoxeka
"Imbongolo Buridan sika" - ukuba noma cha ukuba?
Ukufaka WTP isosha phezu UAZ-469 ngezandla
Umuthi 'Modelform ": ukubuyekezwa odokotela, yokusetshenziswa kanye nokusungulwa
Imidlalo ye-Delphic: Indawo kanye nabanqobile ngo-2014
Amaphaphu-hlobo ikhanda, kubangelwa, izici nezindlela zokwelashwa